သတင်း - အမှုန့်သတ္တုဗေဒနှင့် သွန်းလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ တူညီမှုနှင့် ကွဲပြားမှုများ
အမှုန့်သတ္တုဗေဒနှင့် သွန်းလုပ်ခြင်း၏ တူညီမှုနှင့် ကွဲပြားမှုများ
အမှုန့်သတ္တုဗေဒသတ္တုမှုန့်များကို အမျိုးမျိုးသော သတ္တုမှုန့်များကို လေ့လာပြီး ထုတ်လုပ်သည့် သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီး သတ္တုပစ္စည်းများနှင့် ထုတ်ကုန်များကို နှိပ်ခြင်း၊ ကြိတ်ချေခြင်းနှင့် လိုအပ်သော နောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ဖြင့် အမှုန့်များကို ကုန်ကြမ်းအဖြစ် အသုံးပြုသည်။၎င်းသည် ဖြတ်တောက်မှု အနည်းငယ် သို့မဟုတ် လုံးဝမရှိသော အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနေစဉ်တွင် ရှုပ်ထွေးသောပုံသဏ္ဍာန်များနှင့် မြင့်မားသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ခိုင်ခံ့မှုရှိသော အဆောက်အဦအစိတ်အပိုင်းများကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါသည်။၎င်းသည် ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစွာဖြင့် ဝက်ဝံကိုယ်တိုင် ချောဆီ အစိတ်အပိုင်းများ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အဓိက နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အားသာချက်များ- 1. သတ္တုဓာတ်အများစုနှင့် ၎င်းတို့၏ဒြပ်ပေါင်းများ၊ အောက်ဆိုဒ်ပျံ့နှံ့မှုကို အားကောင်းစေသော သတ္တုစပ်များ၊ ပေါက်ရောက်သောပစ္စည်းများ၊ ကြွေထည်ပစ္စည်းများနှင့် ဘိလပ်မြေကာဗိုက်များကို အမှုန့်သတ္တုဗေဒနည်းများဖြင့်သာ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
2. အမှုန့်သတ္တုဗေဒနည်းလမ်းကို နောက်ဆက်တွဲစက်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် သို့မဟုတ် အနည်းငယ်မျှမလိုအပ်ဘဲ ဗလာ၏နောက်ဆုံးအရွယ်အစားသို့ ဖိနိုင်သောကြောင့်၊ ၎င်းသည် သတ္တုပမာဏကို များစွာသက်သာစေပြီး ထုတ်ကုန်ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။အမှုန့်သတ္တုဗေဒဖြင့် ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်သည့်အခါ သတ္တုဆုံးရှုံးမှုမှာ ၁-၅ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသည်။သာမန်သွန်းလုပ်နည်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်သောအခါ သတ္တုဆုံးရှုံးမှုသည် 80% အထိ ရှိလာနိုင်သည်။
3. အမှုန့်သတ္တုဗေဒ လုပ်ငန်းစဉ်သည် ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပစ္စည်းကို အရည်ပျော်ခြင်းမရှိသောကြောင့် အညစ်အကြေးများ ရောစပ်ခြင်းကို မကြောက်ဘဲ၊ sintering သည် လေဟာနယ်နှင့် လေထုကို လျှော့ချကာ၊ ဓာတ်တိုးမှုကို မကြောက်ဘဲ၊ ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေမည်မဟုတ်ပါ။ ပစ္စည်းအတွက်၊ ထို့ကြောင့်မြင့်မားသောသန့်ရှင်းမှုကိုရရှိနိုင်သည်။s ပစ္စည်း။
4. Powder metallurgy သည် ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းမှုအချိုး၏ မှန်ကန်မှုနှင့် တူညီမှုကို သေချာစေနိုင်သည်။
5. Powder metallurgy သည် တူညီသောပုံသဏ္ဍာန်နှင့် ထုတ်ကုန်အများအပြား၊ အထူးသဖြင့် ဂီယာများနှင့် အခြားတန်ဖိုးကြီးသောထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။အမှုန့်သတ္တုဗေဒဖြင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းသည် ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို များစွာလျှော့ချနိုင်သည်။
1. အသုတ်အရွယ်အစားမရှိသောအခါ အပိုင်း၏အရွယ်အစားကို သုံးသပ်ပါ။
2. မှိုကြေးသည် သွန်းမှိုထက် ပိုများသည်။
1. ကိုယ်စားလှယ် သံ-အခြေခံ သတ္တုစပ်များကို ထုထည်ကြီးမားသော တိကျသော ထုတ်ကုန်များနှင့် အရည်အသွေးမြင့် တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် တီထွင်ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။
2. လုပ်ဆောင်ရန်ခက်ခဲပြီး လုံးဝသိပ်သည်းသော ယူနီဖောင်းအသေးစားတည်ဆောက်မှုဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သတ္တုစပ်များကို ထုတ်လုပ်ခြင်း။
3. ယေဘူယျဆီပါဝင်သော ရောစပ်အဆင့်များ ၏ အထူးသတ္တုစပ်များ ထုတ်လုပ်ရန် မြှင့်တင်ထားသော သိပ်သည်းဆ လုပ်ငန်းစဉ်ကို အသုံးပြုပါ။
4. ကွဲပြားသောပစ္စည်းများ၊ amorphous၊ microcrystalline သို့မဟုတ် metastable သတ္တုစပ်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း။
5. အလွိုင်းအစိတ်အပိုင်းများ၏ ထူးခြားဆန်းပြားသော ပုံစံများ သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှု။
Casting ဆိုသည်မှာ အချို့သောလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော အရည်အဖြစ် သတ္တုကို အရည်ကျိုပြီး မှိုထဲသို့ လောင်းထည့်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။အအေးခံခြင်း၊ ခိုင်ခံ့ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပြီးနောက်၊ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော ပုံသဏ္ဍာန်၊ အရွယ်အစားနှင့် စွမ်းဆောင်မှုရှိသော သွန်းလုပ်ခြင်းကို ရရှိသည်။
1. Casting တွင် ကုန်ကြမ်းအရင်းအမြစ် ကျယ်ပြန့်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးသည်။အခြားဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပုံသွင်းခြင်းတွင် သိသာထင်ရှားသော အားသာချက်များရှိသည်။
2. Casting သည် သတ္တုအရည်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့် ၎င်းသည် ရှုပ်ထွေးသော ပုံသဏ္ဍာန်များရှိသော ကွက်လပ်များ သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းများ အထူးသဖြင့် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးနှင့် သတ်မှတ်ချက်များ ရှုပ်ထွေးသော အတွင်းအပေါက်များဖြင့် ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
3. သွန်းလုပ်ခြင်း၏ အရွယ်အစား၊ အလေးချိန်နှင့် ထုတ်လုပ်မှုအသုတ်သည် အကန့်အသတ်မရှိပါ၊ ၎င်းသည် ပိုမိုလိုက်လျောညီထွေရှိသည်။
4. ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးပြီး အရင်းအမြစ်ချွေတာခြင်း။ပစ္စည်းများအသုံးပြုမှုနှုန်းမြင့်မားပြီး အသုံးချမှုမှာ အလွန်ကျယ်ပြန့်ပါသည်။
5. သွန်းလုပ်ခြင်း၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများသည် အတုလုပ်ခြင်းထက် ပိုဆိုးသည်။
6. သွန်းထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ များပြားခြင်း၊ ပစ္စည်းအများအပြားနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ညံ့ဖျင်းခြင်းတို့ကြောင့်၊ သွန်းလုပ်ခြင်း၏ အရည်အသွေးမှာ မတည်မငြိမ်ဖြစ်ပြီး စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှာ အတော်လေး မြင့်မားပါသည်။
1. သေတ္တာများ၊ ကုတင်များ၊ စင်များ စသည်တို့ကဲ့သို့ ရှုပ်ထွေးသော အတွင်းပိုင်းအပေါက်များပါရှိသော ရှုပ်ထွေးသောပုံစံများကို ထုတ်လုပ်ပါ။
2. Castings များသည် ကျယ်ပြန့်စွာ လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အသုံးများသော သတ္တုပစ္စည်းများကို သွန်းလုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။သွန်းလုပ်ခြင်း၏အလေးချိန်သည် ဂရမ်အနည်းငယ်မှ တန်ရာပေါင်းများစွာအထိရှိနိုင်ပြီး နံရံအထူမှာ 0.5mm မှ 1m ခန့်ရှိသည်။
3. သွန်းလုပ်ခြင်း၏ကုန်ကြမ်းများသည် စျေးသက်သက်သာသာနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပါသည်။
1. အစိတ်အပိုင်းများ၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာ လျော့ရဲနေခြင်း၊ အစေ့အဆန်များ ကြမ်းပြီး ကျုံ့သွားသော အပေါက်များ၊ ကျုံ့သွားသော ချွေးပေါက်များနှင့် ချွေးပေါက်များ အတွင်းပိုင်း အလွယ်တကူ ထုတ်ပေးပါသည်။ထို့ကြောင့် သွန်းလောင်းခြင်း၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ၊ အထူးသဖြင့် သက်ရောက်မှု ခိုင်ခံ့မှုသည် တူညီသော ပစ္စည်း၏ အတုလုပ်ခြင်းထက် နိမ့်ပါးပါသည်။
2. ပုံသွန်းအရည်အသွေးသည် မတည်ငြိမ်ပါ။
စာတိုက်အချိန်- မတ်လ ၃၁-၂၀၂၂